Courting Guest Guging Blog gị
Tọzdee, Septemba 27, 2012 Tọzdee, Septemba 27, 2012 Cassie
Nchịkọta ndị ọbịa bụ usoro dị mgbagwoju anya ma dị nro nke ekwesịrị ịgwọ dị ka mmalite nke mmekọrịta ọ bụla: jiri nlezianya na nlezianya. Dịka onye nwe blọgụ, enweghị m ike ịgwa gị oge ole ejirila m email, ozi ịntanetị spammy. Blọọgụ, dị ka mmekọrịta, na-agbasi mbọ ike ma onye na-ede blọgụ nwere ike ekwesịghị ile ya anya dị ka usoro enweghị isi.
Nke a bụ ndụmọdụ 7 dị mma maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị maka akwụkwọ mmado na ụlọ akwụkwọ blogger:
1. Mata ihe egwuregwu i nwere ike inwe
Tupu imetu blogger na ihe ederede ma obu nyefee gi, mara onye ahu.
Guo Banyere akwukwo ha, muta aha ha, soro ha na Twitter, ma guo ihe ole na ole ka ha muta olu blog ha.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime n’ echiche, hapụ ihe ha kwuru na post ha, zaghachi na tọọji ha, kesaa akụkọ ha nke masịrị gị na netwọkụ gị.
Chee echiche banyere edemede edemede ole ma ole ga - arụ ọrụ maka blọọgụ. Kedu ihe na-efu na blog a? Kedu ihe ga-arụ ọrụ? Hụ ihe na-eme na niche ha na ihe ndị mmadụ na-ekwu maka mgbasa ozi.
2. Mee njem mbụ
Ọ dị mma, ị wulitela ntụkwasị obi na blogger gị ma dịrị njikere ibute mmekọrịta gị na ọkwa ọzọ. Maara na blọọgụ a ga-adabara gị nke ọma ma ị nwere echiche nke ihe ịchọrọ ịmere ma ọ bụ dobe onye na-ede blọgụ. Ugbu a bụ oge ịme njem gị.
Mgbe ị gụchara ntuziaka nke blogger, kpọtụrụ ha site na usoro ha chọrọ. Ọ bụrụ na ha edepụtaghị ụkpụrụ nduzi ma ọ bụ usoro nkwukọrịta kachasị mma na blọọgụ ha, jụọ ha!
Mgbe ị na-akpọtụrụ, bụrụ mmadụ - bụrụkwa! Mee ka ha mata onye ị bụ na ihe mere ị na-akpọtụrụ ha-ka ọbịa post!
3. Bụrụ nwa amadi
Dị nnọọ ka ị ga-emeghe ọnụ ụzọ maka nwanyị, ndị na-ede blọgụ na-achọkwa ka ọ masị ha.
Mee ka ọ dị mfe maka blogger. Ozugbo edere isiokwu gị (dịka ntuziaka ha si), tinye foto ma jupụta ozi ọ bụla ọzọ nke WordPress. Nke a nwere ike ịgụnye mkpado, onyonyo gosipụtara na ihe SEO chọrọ.
Jide n'aka na ị na - akwụ ụgwọ foto ọ bụla ejiri ma nwee mperi ụtọ asụsụ ma ọ bụ mkpope. Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, mana mbido mbụ bụ ihe niile ma a bịa na mmekọrịta na ịde blọgụ ndị ọbịa.
4. Abụla Onye Na-arapara .kwụ
Ọ bụrụ na ị nyefee akwụkwọ ozi gị na ọ naghị arị elu otu ụbọchị ahụ ma ọ bụ ọbụlagodi n’echi ya, egbula onye nwe blọgụ ahụ dịka ị gaghị akpọ oku ugboro ugboro ma ọ bụ zite ụbọchị gị oge izizi ịmalite mmekọrịta. !
Mgbe ụbọchị atọ ma ọ bụ ụbọchị asaa gachara, zigara ha nyocha ma ọ bụ ozi-e na-enweghị iyi egwu. Emela mkparị!
Lelee na blọọgụ ma ọ bụ akaụntụ Twitter iji hụ ọrụ ndị na-adịbeghị anya; enweghị mmelite ọhụụ nwere ike ịpụta blogger na ihe ndị ọzọ.
5. Na-etu ọnụ banyere mmekọrịta ọhụrụ gị
Mgbe ị na-egbu ya nwere ihu ọma n'ịhụnanya, ọtụtụ n'ime anyị chọrọ iti mkpu site n'elu ụlọ. Jiri otu ịnụ ọkụ n'obi were post gị bipụtara.
Ozugbo post gị dị ndụ, kekọrịta na netwọkụ mmekọrịta gị. Ndị na-ede blọgụ nwere mmasị ịhụ ka ha na-ekekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya! Inweta a oké mma blog post dị ka a mara mma nri abalị na-elekọta mmadụ mbak bụ creme brûlée!
6. Ejila uru
Ike gwụrụ onye ọ bụla nke ndị nwe blọgụ chọrọ akwụ ụgwọ maka akwụkwọ ozi ndị ọbịa? Pụtara, Ana m enye gị nnukwu mma, mkpa, na-eme ọdịnaya ma ị chọrọ ka m kwụọ gị ụgwọ?
Gbalịa iji obi ọma gwa onye nwe blọgụ na ịnọghị n'ụgwọ ịkwụ ha, mana ị ga-enwe ọ happyụ iweghachi mmesapụ aka ha maka ibipụta post gị site na ijikọ ha na ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ na mmekọrịta mmadụ na ibe gị.
Imirikiti oge, onye nwe blọọgụ ga-enwe obi ọma ịkwado; naanị ihe ha chọrọ bụ ịmara na ha na-enweta ihe si na mmekọrịta ahụ na anaghị eji ha eme ihe!
7. Na-arụ ọrụ iji mee ka mmekọrịta dị ogologo oge
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị, dịka ịde blọgụ ndị ọbịa, nwere ike ịgwụ ike; mgbe ịchọtara ihe dị mma, tinye ọrụ ahụ ka ịdebe ire ọkụ nke ndị ọbịa.
Nọgide na-akpọtụrụ blogger. Nọgide na-ede maka ha, zigara ha ozi, tweet ma jikọọ ha na ndị na - ede blọgụ ndị ọzọ.
Ọbịa ikenye bụ ihe iwulite mmekọrịta gị na ndị mmadụ n'ịntanetị na ịnweta ikpughe. You maghị, ha nwedịrị ike ịkwado gị ma ọ bụ mee ka ndị nwe blọọgụ ndị enyi gị.
Tags: content Marketingblog ọbịapost ndị ọbịaelekọta mmadụ media
Onyinye Cassie bụ Search Media Networker na dijitalụmkpa na arụ ọrụ na ire ahịa Internetntanetị ruo afọ ise. Mgbe ọ naghị ede blọgụ ma ọ bụ nọrọ ugbu a na ahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ na-enwe ọ spendingụ iwepụta oge ya n'èzí na-eme njem, ịnyịnya ígwè na ịkwọ ụgbọ mmiri Soro ya na Twitter @cassaleenie.
Kedụ ihe na - arụ ọrụ na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi bara ọgaranya?
Ọkt 3, 2012 na 3:00 AM
hI CAss, ichoro onye ahu. Ọ bụ n'ezie a mara mma n'ọnụ. N'ime ndụmọdụ ndị a, echeghị m na m mezue otu ndụmọdụ, mgbe m gbalịrị ịme blọgụ ndị ọbịa ma ọ bụ naanị ịde blọgụ nke m, m na-edebe ụkwụ m n'ala ma na-ejide onwe m na obi umeala.